केन्द्रबाट आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिँदा पार्टीले चुनाव हारयोः रामशरण महत::NepalBhaskar
स्थानीय तहको दुईवटै निर्वाचनको परिणामले तपाईहरुको शक्तिलाई कमजोर सावित गर्यो । यो निर्वाचनको परिणामप्रतिको तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
निर्वाचनले हामीलाई दोस्रो पार्टी बनायो । हामीले अनुमान गरेको भन्दा परिणाम कमै आयो । यसले हामीलाई पक्कै पनि असन्तुष्ट बनाएको छ । यसका कारणहरुको खोजी हुन बाँकी नै छ । पार्टीमा समीक्षा होला । तर पनि केही कमजोरी पहिले नै देखिए । उम्मेद्धारहरु समयमा चयन हुन सकेनन् । छनौटमा केही व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिए । आन्तरिकरुपमा पनि तयारी नभएका कारण ठाउँ ठाउँमा बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्धारी आयो । एकले अर्कालाई सहयोग नगर्ने र विभिन्न ठाउँमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने अन्तरघात पनि भयो । सरकारमा हुँदा भए गरेका केही कमजोरीका कारण पनि त्यसको प्रभाव पर्यो । तर यो स्थानीय चुनाव हो । स्थानीयतह निर्वाचनमा दोस्रो भएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि हामी दोस्रो भएका छौं । स्थानीयस्तरमा हुने चुनाव भएकाले त्यहाँ कसरी परिचालन, व्यवस्थापन गरियो भन्ने कुराले पनि हार जितमा फरक पर्छ ।
भूगोल, परिवेश, सांगठनिक संरचना, तथा जनता तिनै हुन् । भोलिका दिनमा प्रान्तीय, केन्द्रिय निर्वाचनलाइ पनि यसैगरी प्रभावित हुने त हुन् नि ? धरातल नै गुमेपछि अरु चुनावमा त झन कांग्रेस कमजोर बन्ने सम्भावना बढ्यो नि ?
यहाँले भनेको ठीक हो । यसलाई हामीले आइ ओपनरका लिनुपर्छ । कांग्रेसको आँखा खुल्नुपर्छ यो निर्वाचनबाट । हामी ठूलो पार्टी सँधै ठूलो भइरहन्छौ । जनता हाम्रो साथमा छदैछन् भनेर बस्ने स्थिति छैन । पार्टीका निर्णय कसरी हुन्छ ? नेतृत्व कसरी चलेको छ ? विगतका कामको समीक्षा गर्दै हामीले गरेका राम्रा कामहरु बारे पनि जनतालाई बुझाउन सकिएन । विगतमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दाको हाम्रो भूमिका कस्तो रह्यो यि सबै कुरा जनता सामु लैजान पथ्र्यो सकिएन । संगठन र कार्यकर्ता कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा हामी चुक्यौ । सञ्चार माध्याम मार्फत हाम्रा कुरा आम जनताको बीचमा लैजान र अहिलेको सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । कांग्रेसले यो स्थानीय निर्वाचन पाएको परिणामलाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
यि तमाम अभाव र कमजोरीलाई सच्याउन पार्टीभित्रको एकता आवश्यक पर्ला । कांग्रेसभित्र व्यक्ति व्यक्तिका गुट छन् । टिकट वितरणमा पनि काविल मानिसलाई भन्दा तिनै गुटका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिँदा देशैभर स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्धारी परयो ।
तपाईले भनेका केही कुरामा सत्यता छ । तर गुट कांग्रेसमा मात्र छैन । नेपाली कांग्रेसमा टिकट वितरणमा केही समस्या देखियो । तेरो र मेरोको आधारमा टिकट दिइयो । जुन जुन ठाउँमा स्थानीयस्तरमा सहमतीका आधारमा टिकट दिइयो त्यहाँ कांग्रेसले जितेको छ । जहाँ स्थानीयस्तरमा निर्णय नभइकन केन्द्रले टिकट त्यस्ता ठाउँहरुमा कांग्रेसले हार व्यहोरेको छ । यसकारण यि मामिलामा पार्टी नेतृत्व चुकेको छ । कसर पार्टीलाई सामुहिक नेतृत्वमा लैजाने र पाटीभित्र रचनात्मकरुपमा बहस होस् भन्ने हामीले चाहिरका छौ । हतार हतारमा एक्लै निर्णय गर्ने अनि परिणाम कसरी सकारात्मक आउछ ? पार्टीभित्र गुटबन्धी बढ्न थालेको छ । तर नेतृत्व गुटबन्धी भन्दा माथि उठेर परिपक्व हुन पर्यो । निर्वाचन पनि एक किसिमको युद्ध नै हो । युद्ध जित्नलाई हुनुपर्ने तयारी कांग्रेसले गर्न सकेन ।
त्यसो भए पार्टी नेतृत्व कसरी चलेको छ ? निर्वाचित सभापतिको एउटा गुट, रामचन्द्र पौडेलको अर्को गुट, कृष्ण सिटौला, खुमबहादुर खड्का सबै गुट मात्र बनाउने अनि कसरी पार्टी बन्छ त ?
त्यस्तो त होइन । पार्टीभित्रै सबैको आआफ्नो व्यक्तित्व छ । तर ति सबैगुट, समूहलाई संयोजन गरेर माथि उठ्ने काम त नेतृत्वको हो नि । पार्टी सभापतिले पार्टी मिलाएर लैजान पर्यो नि । गुट र समूहभन्दा माथि उठेर सभापतिले भूमिका खेल्न पर्यो । जब साझा चुनौती र पार्टीको एजेण्डा आउछ त्यसबेला सभापतिले गुटलाई होइन पार्टीलाई महत्व दिन पर्यो ।
त्यसो भए अहिलेको पार्टी सभापतिमा समन्वयकारी क्षमताको अभाव हो ?
क्षमता त होला तर क्षमता उपयोग भएको मैले देखेको छैन ।
पार्टी सभापतिलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी तपाईहरुको हुँदैन ।
सहयोग त सबैले गरिरहेका छौ । हामीले बारम्बार भनिरहेका छौ पार्टी सभापति असफल हुनु भनेको पार्टी असफल हुनु हो नि । हामी आफ्ना अन्तुष्टि, आन्तरिक विवाद बाहिर पोख्ने पक्षमा छैनौ ।
तपाईहरुबीचको ६०-४० को विवाद अझै कायम छ हैन ? यहीकारण मन्त्रीपरिषद पनि विस्तार हुन सकेको छैन ।
होइन होइन त्यस्तो केही छैन । कुनै समयमा थियो होला । हामीले अहिले यो कुरा उठाएकै छैनौ । हामी यति मन्त्री चाहिन्छ उती चाहिन्छ भन्ने हाम्रो कुनै माग छैन । यदि त्यस्तो कसैले भनेको छ भने त्यो गलत हो । व्यक्ति र संख्यामा कुनै विवाद नै छैन । तर पार्टीले सामुहिकरुपमा निर्णय लिन परेयो भन्ने मात्रै हो ।
स्थानीय तहमा तपाईहरुको पार्टी दोस्रो हुनुमा तपाईंहरुको आन्तरिक कमीकमजोरीले पारेको प्रभाव एउटा होला तर मुख्य कारण तपाईहरु पूराना र परम्परागत शक्तिप्रतिको आम जनताको विकर्षर्ण मूल कारण देखियो नि ?
परम्पारगत शक्ति कसलाई भन्ने अनि नयाँ शक्ति को हो ? अहिले बेनेको ठूलो पार्टी एमाले पनि पूरानै पार्टी नै हो नि । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि पूरानो भइसक्यो । अहिले भएका त यिनै ठूला पार्टी हुन् । नयाँ शक्ति भन्नेहरुले पनि केही प्रभाव पारेको देखिएन । एउटा कुरा के हो भने राजनीतिक दलको निर्माण त्यति सजिलो छैन । बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो र आकर्षित देखिन्छ । दल बनाउन त्यति नै कठीन छ । लामो इतिहास, संगठन, यसको लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक विचार, सिद्धान्तको लामो सर्घर्षपछि मात्र यो सम्भव हुन्छ । अहिले नयाँ शक्तिको चर्चा चले पनि साच्चिकै शक्ति आर्जन गर्न कसैलाई पनि सजिलो छैन । यो भन्दा अगाडि पनि धेरैले पनि प्रयास गरेका छन् । बाबुरामजी जस्तो विश्वसनीय छवी बनाएको, प्रधानमन्त्री पनि भइसकेको व्यक्तिले प्रयास गर्दा पनि त परिणाम त नआउने रहेछ ।